Vao hary tety ambonin'ny tany dia efa tsy nanan-jo hahazo ny fitiavan'ny ray aman-dreny niteraka azy ireo zaza kambana.
Fanompoana: fikelezan'aina ho an'ireo matanjaka ao anatin'ny fiaraha-monina, ireo andriana mpanan-karena.
Novonoina tsy mivantana loatra ny zaza kambana. Apetraka eo amin'ny fivoahan'ny andian'omby na avela ho sempotra ao anaty fompotra, araka ny heno tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha.
Zanaka tantsaha mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana ary fihazana ka mahatsiaro ho miaina finaritra ao anatin'izany i Nary.
Pejy 51 amin'ny 52